हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ? यससम्बन्धी भ्रमबारे जानौं – Himalaya TV
Home » समाचार » हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ? यससम्बन्धी भ्रमबारे जानौं
१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १७:४५
हस्तमैथुनको विषयमा कैयौं भ्रमहरू पाइन्छन् । कतिपयले यसलार्इ गलत सम्झिन्छन् । तर विज्ञानले यसलार्इ गलत मान्दैन । स्वास्थ्यको लागि पनि हस्तमैथुन ठिक र सामान्य मानिन्छ ।
के हो हस्तमैथुन?
अाफ्नो सन्तुष्टिको लागि कसैले गोप्य अंगहरू चलाएर वा छोएर अानन्द प्राप्त गर्दछ भने त्यसलार्इ हस्तमैथुन भन्न सकिन्छ । व्यक्तिपिच्छे यसको तरिका भने फरक-फरक हुनसक्छ । हस्तमैथुन गर्दा मानिसहरू अाफ्नो दिमागमा कुनै सुन्दर पलको याद गर्ने वा मन परेको व्यक्तिको बारेमा कल्पना गर्ने गर्दछन् ।
के हस्तमैथुन गर्नु गलत हो?
होइन, यो गलत हुँदै होइन । यो केवल अात्मसन्तुष्टि लिने निजी र प्राकृतिक तरिका मात्र हो । यसबाट अाफूले अाफैंलार्इ शारीरिक सुख वा सन्तुष्टि दिन सकिन्छ । बिल्कुलै निजी विषय भएकोले सार्वजनिक ठाउँमा हस्तमैथुन गर्नुचाहिं गैर कानुनी हुन्छ ।
हस्तमैथुन महिला वा पुरुष दुवैले गर्दछन् । पुरुषको कुरा गर्ने हो भने लगभग १७ वर्षको उमेरपछि यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुन चाहन्छन् । कसैले उक्त उमेरपछि पनि नगर्न सक्छन् भने कोहीकोहीले देखासिकीमा त्योभन्दा कम उमेरबाटै सुरु गर्न पनि सक्छन् । भित्रैबाट इच्छा जागृत नभएसम्म हस्तमैथुन नगरेकै राम्रो मानिन्छ ।
के हस्तमैथुन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ?
हस्तमैथुनले मानिसलार्इ अन्धो वा पागल केही बनाउँदैन । अाम मानिसमा यसले अन्धो बनाउँछ भन्नेजस्ता गलत धारणा फैलिएको पाइन्छ । यस्तो गर्नाले अाँखाको तल्लो भाग कालो वा निलो केही हुँदैन । न यसले हाम्रो शारीरिक विकास नै रोक्दछ ।
वास्तविकता के हो भने हस्तमैथुन गर्नाले तनाव कम हुन्छ र शरीरमा खुशी संचार गर्ने हर्मोन इंडरफिंस निष्काशन गर्दछ । यसबाट तपाइँलार्इ अानन्दको अनुभूति हुन्छ । निन्द्रा लाग्न सहयोग गर्नुको साथै यसले निजी अंगलार्इ सक्रिय बनाउँछ ।
यसको मनोवैज्ञानिक फाइदा पनि छ । हस्तमैथुन गर्ने व्यक्तिले अाफ्नो शारीरिक अावश्यकताको बारेमा थाहा पार्इ हुनेवाला जीवनसाथीसमक्ष अाफ्नो शारीरिक चाहना र अावश्यकताको बारेमा खुलेर बताउन सक्छ । यो सुरक्षित यौनको उत्तम तरिका हो ।
के सेक्स टोय प्रयोग गर्नु राम्रो हो?
महिलाहरू हस्तमैथुन गर्दा अाफ्नो गुप्तांगमा केही छिराउने गर्छन् । कतिपयले बजारमा पाइने सेक्स टोय पनि प्रयोग गर्ने गर्छन् । अाफूलार्इ कुनैपनि किसिमको कष्ट नभएसम्म यस्तो विधि सुरक्षित मान्न सकिन्छ । अाफूले प्रयोग गर्ने वस्तु ब्याक्टेरियारहित हुनु अावश्यक हुन्छ । हस्तमैथुन गर्दा महिलाले कुनै पनि वस्तु योनीभित्र नअड्किअोस् भन्नाको लागि होसियारी अपनाउनु राम्रो हुन्छ । यदि अाफूले प्रयोग गर्ने वस्तु जीवाणुरहित छ कि छैन भन्नेबारेमा दुविधा रहेमा उक्त वस्तुमा कण्डोम लगाएर प्रयोग गर्दा सुरक्षित हुन्छ ।
यस्ता छन् भटमासका ५ चमत्कारिक गुण